Ciidamo Tiro Badan Oo Uu Hogaaminayo Jananka Guud Ee Ciidamada Booliska Somaliland Oo Saaka U Baxay Gobolka Sool Iyo Ujeedada Socdaalkooda | Saxil News Network
Ciidamo Tiro Badan Oo Uu Hogaaminayo Jananka Guud Ee Ciidamada Booliska Somaliland Oo Saaka U Baxay Gobolka Sool Iyo Ujeedada Socdaalkooda
Hargeysa(Saxilnews) Waxa saaka ka baxay magaalada hargeysa una baxay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ciidamo aad u tiro badan oo uu hogaaminayo jananka guud ee ciiidamada booliska Somaliland sareeye guuto Cabdilaahi Fadal Iimaan.
Waxaan ciidamadan oo iskugu jiray ciidamada booliska iyo kuwa gaarka u tababaran ee RRU-da ayaa waxay u shiraaqdeen magaalada Laascaanood oo dhawaan ay ka dhacday rabashado iska hor imaad ah oo u dhaxeeya bulshada iyo ciidamada booliska .
Waxaana rabshadan ay sababeen khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh,iyada oona dhimashadu ahayn 3 ruux halka ay tiro kale oo dhaawacina jiraan.
Sidoo kalena bulshada magaalada laascaanood ayaa weeraray xarumaha saldhigyada booliska laascaanood iyo xarumaha dawlada iyaga oona maxaabiis ku xidhnayd saldhiga dhexe ee magaalada laascaanood ooda ka qaaday sidoo kale gubay dhamaan faylashii dambiyada ee saldhiga yaalay.
Waxaana wararka ay helayso shabakada Ramaasnews kana helayso magaalada laascaanood ay sheegayaan in ay saldhiga ku xidhnaayeen maxaabiis kala duwan oo qaar maxkamadda loo waday iyaga oona dhamaan maxaabiistaasi wada baxsaday.
Ciiidamada booliska laascaanood ayaa iyagu hawl galo ka wda gudaha magaalada laascaanood.
Xaalada magaalada laascaanood ayaa hadda dagan iyaga oona ay magaalada ku sugan yihiin xubno wasiiro ah oo ka socda xukuumadda Somaliland.